Importing Videos Watch on iPad
> Resource> iPad> Olee Otú M Pụrụ Watch Movies On iPad
I agụụ kwụghachi onwe gị na-iPad? Ì bu n'obi iji nweta ya a Christmas? Ị na-echegbu na i nwere ike ọ gaghị enwe ike na-ekiri fim na gị iPad n'ihi na ị ga-isi ike nyefee ma ọ bụ mmekọrịta gị video faịlụ na nke ahụ bụ na gị na Windows arụ ọrụ PC? Ọ bụ n'ihi na video faịlụ na-anaghị akwado ma ọ bụ na e dere kedi codecs? Anyị nwere ụfọdụ ngwọta maka unu; ị pụrụ ọbụna ibudata ma ọ bụ ndekọ TV na-egosi, FREE, na-ekiri na gị iPad!
Otú ọ dị, ọtụtụ faịlụ ebudatara ma ọ bụ dere wee ghara ghọtara site iPad si ndikpan anatara nke na-akwado video formats. N'ihi ya, ị ga-mkpa iji tọghata video faịlụ na ma Method 1: Site online AVI Ntụgharị ma ọ bụ; Method 2: Desktọpụ Ntụgharị.
Usoro 1: Online Video File Ntụgharị
Method 2: Desktọpụ Video File Ntụgharị
E nwere ọtụtụ nhọrọ ịhọrọ site na ọ bụrụ na ị na-ahọrọ iji tọghata gị video faịlụ online. A bụ ihe a na ndepụta nke online converters ebe i nwere ike iji mpikota onu, tọghata ma ọ bụ download free videos na-ekiri na gị iPad. Niile ị chọrọ bụ otu ebe na ezi njikọ Ịntanetị. Ọ dịghị downloads ma ọ bụ nwụnye chọrọ; ma i nwere ike na tọghata otu faịlụ na oge. Ihe a bompa maka ndị nwere ihe iji tọghata!
Ị nwere ike ma bulite gị video faịlụ si obodo nchekwa ebe video faịlụ na-azọpụta ma ọ bụ nanị ịdọrọ-na-dobe ha jidesie igbe nyere ma ọ bụrụ na mma a na-nyeere. Alternatively, idetuo na-Tapawa video si URL n'ime kọlụm ibudata ọkacha mmasị gị video clip.
Ebe ọ bụ na e nweghị echichi chọrọ, ị na-adịghị ka nchegbu banyere ndakọrịta okwu na gị PC si ọrụ usoro. Ị dị nnọọ ga-n'aka na online converters-enye gị nhọrọ nke mmepụta formats na ị chọrọ maka ịkpọ azụ na-ekiri fim na gị iPad.
Nanị lelee Usoro 2 ma ọ bụrụ na online converters na-adịghị ike ịnapụta ruo gị anya.
The Wondershare Video Converter Ultimate bụ dakọtara maka download jidesie ma Windows na Mac ịwa PC. N'ihi ya, ị ga-obi ike na ị ga-enwe ike ibudata, tọghata na-nyefee video faịlụ na nke ahụ bụ na gị na Windows PC na-ekiri na iPad. Dị nnọọ gaba ibudata ikpe mbipute na mgbe ahụ na-eso na na nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu n'okpuru (n'ihi na a mfe akakabarede na nhọrọ dezie bụrụ na ị chọrọ).
Iji tinye gị video faịlụ n'elu interface, ị nwere ike ma ikpuru na faịlụ ozugbo gị Obodo ndekọ, pịa na + Tinye Files icon ma ọ bụ site Ibu Ibu DVD. Mgbe ahụ, pịa Dezie (nke bụ na bụla bulite faịlụ dị ka ihe atụ n'okpuru) na gaba Nzọụkwụ 2 maka inwekwu nkọwa.
E wezụga ịbụ ike ewepụtụ akuku gị videos, ị nwekwara ike hazie ya na wuru na-mmetụta nakwa dị ka tinye na watermarks ma ọ bụ ndepụta okwu. Ọzọkwa, ị pụrụ ịhụchalụ mgbanwe na ezigbo oge!
Kama inwe iji aka na-ahọpụta ndị mmepụta usoro maka gị video faịlụ, n'ebe ahụ bụ preset na gị mma. Dị nnọọ na-aga n'ihu na-agagharị n'ihi gị ika ma ọ bụ nlereanya nke ngwaọrụ maka playback na mmepụta Format 's adaala menu. Ọ bụ ihu ọma dị mfe dị ka na, na ihe nile ị na-ekpe na-eme ugbu a bụ pịa na tọghata bọtịnụ. E ị na-aga, nọdụ azụ ma zuru ike ruo mgbe mmapụta ozi-agwa gị na ọ niile dechara. Ugbu a, i nwere ike ịmalite na-ekiri fim na iPad!
Ị ga-achọpụta na e nwere ihe abụọ ọzọ dị iche iche nhọrọ dị ka ọkụ na Download n'elu nke interface. Dị ka aha-atụ aro, ị nwere ike ma idetuo ọdịnaya na gị DVD (bụghị DRM-echebe) ọzọ ọhụrụ diski ma ọ bụ nanị ọkụ gị video faịlụ jidesie a DVD ma ọ bụ mepụta ISO oyiyi na wdg Alternatively, download gị vidiyo si na online gụgharia saịtị. Mgbe ahụ, nanị tọghata na nyefee ya jidesie gị iPad si akwado usoro na codec maka ihe kachasị playback ahụmahụ!
Olee otú Mee a Playlist on iPad